Gold kuifukidza NdFeB
Nickel kuifukidza NdFeB (98)
tiny magnets a
Zingi kuifukidza NdFeB
Magnetic Magungano = Cup magnets a
Kurongedza dhayagiramu pamusoro NdFeB
Cooperative munhu anoda kubetserwa
Company chikwata Exhibition
Actual kushandiswa chigadzirwa Actual kushandiswa chigadzirwa
pamusoro pedu pamusoro pedu
Ningbo Hehai Electric Co., Ltd (General Magnetic) vari magineti mugadziri.
Tinotarisa magnets a uye tiri nokutengesa zvikuru tsika magnets a
Magnets a vari zvinowanzoshandiswa sensors, motokari Motors, dzemagetsi motokari, zvinhu zvemagetsi, etc.
Our zvakwakanakira vari yakaoma tsika magnets a mukugadzira. High yepamusoro uye zvakasimba shiviriro magnets a.
MAONERO MORE >>
Featured zvinogadzirwa Featured zvinogadzirwa
EPOXY NEODYMIUM magineti
NdFeB chinoumba = rinobva Collet
Dear Friends China achava CNY mazororo anobva Jan.20, 2020 kusvika Feb.01, 2020, zvikuru chinyakare Chinese kweGore Idzva Holidays! Kutangazve basa musi Feb.03, 2020, saka kana uchida rako kuitira pakukurukura pamberi CNY, kuti anofanira kuiswa kanenge pamberi Dec.10, 2019. anowanzoita December ndiwo mwedzi iwe ...
Magnetic Zvaishandiswa Market - Global Indust ...
Magnetic zvinhu zvinonamatwa kuti tarasika nhaka rinobva ehupfumi kana anogona magnetized. Pachishandiswa zvivako zvavo uye magumo-kushandiswa, zvinhu izvi zvinogona semhosva chechigarire kana duku. Mhando dzakasiyana-siyana rinobva zvinhu zvakadai munyoro, zvakaoma uye Semi-rakaoma anoshandiswa rinobva mai ...
Alnico Ring Magnet, Custom Magnet, Bar Magnet, High Temperature Magnet , Neodymium Magnet , Alnico Pot Magnet,